यस्ता छन् खाली पेटमा लसुन खानुका फाइदा
५ फाल्गुन २०७५, आईतवार
काठमाडौं । हाम्रो भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने गर्छ लसुन । किनभने तरकारीको स्वाद र वास्ना बढाउनका लागि लसुन अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ । यद्यपी लसुनको साइनो स्वादसँग मात्र जोडिएको छैन । खाली पेटमा लसुन खानुको अरु थुप्रै फाइदा छन् । यदि हामीले हरेक दिन एक केस्रा लसुन मात्र सेवन गरियो भने, त्यो अमृतसमान हुन्छ । त्यसको लागि एउटै सर्त हो, बिहान खाली पेटमा सेवन गर्न ।
लसुनमा भिटामिन र मिनरल्सयुक्त पोषक पदार्थ भरपुर मात्रामा हुन्छ । यसमा खासगरी भिटामिन बि १, बि ६, सी, म्यागजिन, क्याल्सियम र कपर पाइन्छ । दैनिक लसुन सेवन गर्दा दिनभरका लागि शरीर सुरक्षित रहन्छ । साथै इनर्जी पनि मिल्छ ।
संभव भएसम्म लसुन खाली पेटमा बिहानै खानुपर्छ । लसुनलाई काँचो खानु बढी प्रभावकारी हुन्छ । किनभने पकाइएको लसुनमा औषधीय गुण एकदमै कम हुन्छ । यसको प्राकृतिक एन्टिबायोटिक गुण प्राप्त गर्नका लागि खाली पेट सेवन गर्नुपर्छ ।
आयुर्वेदमा लसुनलाई जवान रहने औषधी मानिन्छ । साथै यसले केही रोग जस्तै पायल्स, कब्जियत, कानको दुखाई, उच्च रक्तचाप, अरुचीमा यो एकदमै उपयोगी हुन्छ । यसका फाइदाहरु निम्न छन् ।
कोलेस्टोर नियन्त्रणका लागि लसुन निकै प्रभावकारी मानिन्छ । बिहान खाली पेटमा लसुनको केस्रा सेवन गर्दा कोलेस्टोर नियन्त्रण हुने गर्छ ।
बिहान खाली पेटमा लसुन सेवन गर्दा रक्त प्रवाह नियमित हुन्छ । यसले हृदयसम्बन्धी समस्या हटाउँछ । लसुनले रक्तनलीलाई चौडा बनाइदिन्छ, त्यही कारण रक्त प्रवाह सजिलो हुन्छ । जसलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ, उनीहरुले खाली पेट काँचो लसुन सेवन गर्नुपर्छ । यदि लसुनको स्वादमा रुची छैन भने लसुन सेवन गरिसकेपछि एक गिलास दुध सेवन गर्नुपर्छ । चिकित्सकको परामर्श अनुसार लसुनको सप्लिमेन्ट पनि लिन सकिन्छ ।
हृदयलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि लसुन एकदमै उपयोगी हुन्छ । यसले रक्त प्रवाहलाई सुचारु गराउँछ । यही कारण हृदयरोगको भयबाट बचाउँछ । मुटुलाई स्वस्थ्य राख्नका लागि दिनहुँ दुई केस्रा काँचो लसुन पिसेर सेवन गर्नु लाभदायक हुन्छ ।
लसुनमा भिटामिन सि, बि–६, म्यानिज र सेलेनियम हुन्छ । यी सबै तत्वले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । लसुनमा रहने एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टिमाइक्रोवियल गुणले शरीरमा रोग लाग्न दिदैन ।
लसुनमा शक्तिशाली एन्टिफंगल गुण हुन्छ, जसले दाद, चिलाउने लगायतका रोगसँग लड्ने क्षमता राख्छ । यो केन्डिया नामक इन्फेक्सनसँग पनि लड्छ । जहाँ इन्फेक्सन भएको त्यहाँ लसुनको तेल लगाउनुपर्छ । काँचो लसुन नियमित रुपमा सेवन गर्नुपर्छ ।
लसुनमा रहेको एन्टिभाइरल र एन्टि इन्फ्लेमेटरी गुणले शरीरमा विभिन्न प्रकारका एलर्जीसँग लड्न मद्दत गर्छ । एलर्जीको कारण श्वासनली सुन्निने समस्यामा समेत लसुन उपयोगी मानिन्छ ।
पेट सम्बन्धी समस्या हटाउनका लागि लसुन उपयोगी हुन्छ । यसका साथै लसुनको सेवनले पेटमा रहेको विषाक्त पदार्थ पनि सफा गर्छ ।
यदि दाँतको दुखाईबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, लसुनको एक केस्रा पिसेर दाँत दुखेको स्थानमा लगाउनुपर्छ । केही समयपछि दुखाई कम हुन्छ । किनभने लसुनमा एन्टी ब्याक्टेरियल र दुखाइ कम गर्ने गुण हुन्छ ।
यदि खानेकुरामा अरुची छ भने त्यसको राम्रो समाधान हो, लसुन । बिहान नियमित रुपमा लसुन प्रयोग गर्नुहोस्, यसले पाचन यन्त्र ठीक हुन्छ ।
– लसुन सेवन गरेपछि त्यसको साइड इफेक्ट जस्तै, सुन्निने, पेट फुल्ने, ग्याष्ट्रिक हुने, पेटको खराबी हुने, सास गन्ध आउने हुनसक्छ ।
– यसले रगतलाई पातलो बनाउँछ । त्यसैले रगत पातलो बनाउने औषधी सेवन गरिरहेकाहरुले यसको सेवन गर्नुअघि चिकित्सकको परामर्श लिर्नैपर्छ ।
च्याउ खाँदा स्मरणशक्ति ताजा राखिराख्ने अध्ययनको निष्कर्ष
गुर्जोमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरैः कति खाने र कसरी खाने ?
‘टन्सिललाई ख्यालठट्टा नठानौं, यसले निम्त्याउन सक्छ मुटुरोग’
अल कायदाका वरिष्ठ नेता मस्री मारिए
दशैंको मुख्य टीका कति बेला, कसरी लगाउने ?
‘प्रधानमन्त्रीले रअको प्रमुखलाई भेट्नु आपत्तिजनक’
सुन्धारास्थित मस्जिदमा तोडफोड
२४ घण्टामा थप २२ सय २५ जनामा कोरोना संक्रमण, १३ संक्रमितको मृत्यु
२ हजार २२५ जना कोरोना संक्रमित थपिए
बीएण्डसीका ४० स्वास्थ्यकर्मीले जिते कोरोना
प्रहरीले ओली समूहद्वारा हत्या गरिएका नेकपा कार्यकर्ताकाे जाहेरी बुझ्न मानेन
मुकेश चौरसियालाई न्याय नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्छौं : मातृका यादव
‘मुकेश चौरासियाको हत्याका दोषीलाई गुटगत संरक्षण’